Izifundo zesiNgisi - iMontreal - BLI Isikole solimi eCanada
Izifundo ze-General EnglishThola uhlelo oluhambisana nezidingo zakho
Izifundo ze-BLI English zigxila ekuthuthukiseni amakhono olimi amane asemqoka: ukukhuluma, ukufunda, ukulalela nokubhala ngokusetshenziswa okufanele kwezakhiwo zohlelo lolimi, isilulumagama nefonetiki.
I-BLI inikela ngezinhlelo ezahlukahlukene zolimi ukuhambisana nezidingo zawo wonke umfundi. Ngamashejuli anhlobonhlobo nezinketho, singakususa ekuxhumaneni okuyisisekelo kuye ebuchwephesheni obuphambili bezemfundo ngokusebenzisa izifundo ezibandakanyayo nezinamandla ezinikezwa ngothisha abanolwazi abaqonda izisusa zakho nezinhloso zakho.
Ekupheleni kohlelo, uzokuhlomela kangcono ukuxhumana ngendlela ezenzakalelayo futhi engokwemvelo futhi uzokwazi ukuveza imicabango kanye nemibono yakho ngokushelela nangokucacile ezimweni ezihlukile.
Izifundo ezingama-36 ngesontoOkukhulu kakhulu
Thuthukisa ulwazi lwakho ngamakhono athile olimi ngokuthuthukisa amaphrojekthi kanye nokufunda okusekwe emisebenzini. Prakthiza amakhono akho okubhala, uthuthukise amakhono akho okulalela, uthuthukise amakhono akho okufunda.
Izifundo ezingama-30 ngesontoOkujulile
Shesha inqubo yakho yokufunda ngezigaba ezikhethekile ze-ESL / FSL. Ngokuhlanganiswa kweTask-based Learning nezifundo zamakhono endabuko. Khetha amakilasi ngokuya ngendawo oyithandayo.
Izifundo ezingama-24 ngesontoIsikhathi esigcwele
Futhi ukumboza amakhono amane olimi esimweni esigxile kumfundi nakwezokuxhumana, ukuthuthukisa ukushelela kwakho nokunemba ngemisebenzi yokusebenzela eklanyelwe ukukusiza uthuthukise amakhono akho okuxhumana ngomlomo.
Izifundo ezingama-18 ngesontoOkwesikhashana
Funda futhi uzijwayeze zonke izici zolimi olufundayo oluhlanganisa wonke amakhono amane (ukufunda, ukubhala, ukukhuluma nokulalela), uhlelo lolimi kanye nesilulumagama usebenzisa indlela yokuxhumana ngezigaba ezinamandla nezisebenzayo.
Izinhlelo Ezijwayelekile ZesiNgisiIncazelo yeklasi
Kuleli bhulokhi lamakilasi abafundi bazofunda yonke imiqondo yohlelo lolimi edingekayo ukuthuthukisa ukunemba kwabo, ukushelela nokuqonda kwabo ezingeni lesiNgisi nesiFulentshi. Lesi yisigaba esisebenzisanayo lapho abafundi benethuba lokusebenzisa uhlelo lolimi futhi bafunde ngemithetho ngokutholakala, ngokuholwa nguthisha nangezincazelo ezithile ezicacile. Kugcizelelwa ngokwengeziwe ukukwazi ukuxhumana usebenzisa iphuzu lolimi, yingakho kunamathuba amaningi kakhulu okuzijwayeza nokwenza ngcono. Abafundi bazokwazi ukuqhuba amakhono olimi ama-4 (ukulalela, ukukhuluma, ukufunda nokubhala) endaweni ehlanganisiwe. Izihloko zezigaba ezahlukahlukene zezifundo ezifanele ngokusebenzisa amasu wokufunda ahlukile akhuthaza ukuxhumana endaweni yangempela yomhlaba. Abafundi bathuthukisa amakhono abo olimi ngokusebenzisa incwadi yezifundo nangokuhlanganyela emisebenzini eminingi ehlukahlukene ukubasiza bafunde futhi bathuthuke.
Le nkambo isebenza ngemisebenzi yesiNgisi / yesiFulentshi futhi yakhelwe nxazonke ngezindikimba eziklanyelwe ukuthuthukisa amakhono emvelo okuxhumana nsuku zonke. Inhloso kuleli klasi ukuthuthukisa ukushelela. Kukhona kugxilwe ekukhulumeni nasekusebenzisaneni phakathi kwabafundi ukuze bakwazi ukusebenzisa lokho abakufundile emakilasini abo adlule. Isigaba siyasebenzisana futhi sikhuthaza ukusebenza kweqembu neqembu ukuze kufinyelele umgomo wokuxhumana njengesipikha somdabu futhi siphonsela inselelo abafundi ngemisebenzi nemisebenzi esekelwe yiprojekthi efana nokudlala indima, izingxoxo-mpikiswano, izingxoxo, ukulandisa izindaba, imidlalo yokuxhumana nabanye noma yamagama amaphrojekthi amancane.
Leli klasi lizothuthukisa ulwazi lwakho ngamakhono athile olimi ngokuzivocavoca okuhlukahlukene nemisebenzi eguquguqukayo. Njalo ngesifundo, kugxilwa okuhlukile, njengokufunda, ukubhala, ukulalela, ukukhuluma, ulwazimagama nezinkulumo, kufaka phakathi izisho, kanye nokubiza amagama kanye nokufunda okusekwe emsebenzini. Kunezigaba ezahlukahlukene ezenzelwe lelo zinga ngalinye, kusukela ekuqaleni kuya phambili. Ungazijwayeza amakhono akho okubhala ngokukhiqiza iphephandaba lesikole, noma uthuthukise amakhono akho okulalela ngokuhlola umhlaba werediyo nama-podcasts.
Lesi sigaba senzelwe ukukusiza ukusheshisa inqubo yakho yokufunda ngenkathi kukuvumela ithuba lokukhetha izifundo ezisuselwa kuzintshisakalo zakho ezithile nezidingo zakho. Njalo ngeseshini sinikeza inkambo ehlukile yesiNgisi / yesiFulentshi enesihloko esithile noma ukugxila okuphakathi, okufana nesiNgisi / isiFulentshi kumafilimu nomculo. Ngoba kunabafundi abambalwa kuleli klasi, kunakwa umuntu ngamunye ngokukhethekile kuthisha.
Izinsuku zokuqala zesifundo
Ubusuku obungu-1 (Ayikho maximium)
Isilinganiso esingu-12 | Ubukhulu be-16